Android 9.0 Pie izao dia ofisialy: misy fanavaozana ho an'ny Google Pixel | Androidsis
Eto ny Android 9.0 Pie: Jereo ny antsipiriany rehetra
Ny iray amin'ireo zava-miafina lehibe indrindra tato anatin'ny volana lasa dia izay mety ho anaran'ny Android P. Safidy maro no nodinihina, fa ny anarana mamy foana. Saingy, toa tsy hiandry intsony intsony isika vao hahalala izany. Satria ny anarana voafidy ho an'ity kinova ity dia naseho tamin'ny farany. Android 9.0 Pie izao dia ofisialy.
Ny fomba nanatanterahana azy ho ofisialy dia tsy ny tena ortodoksa indrindra, satria tamin'ny alàlan'ny fanavaozana ny Google Pixel izay efa fantatsika ny fisian'ny Android 9.0 Pie. Tsy sarotra i Google, ary nisafidy ny Pie (Cake) ho an'ity kinova ity izy ireo.
Tsy nisy fampandrenesana, ary tsy nampoizina mihitsy ity vaovao ity. Ny Google Pixel dia efa nahazo ny fanavaozana ofisialy ny Android 9.0 Pie. Vaovao tsara ho an'ireo mpampiasa izay manana maodelin'ny orinasa amerikana. Satria izy ireo no ho voalohany mankafy an'ity kinova ofisialy ity.
Ny fanolorana ofisialy ny kinovan'ny rafitra fiasa dia nokasaina ny 20 Aogositra, ary toa mitohy izany. Na dia talohan'ity daty ity aza efa fantatsika ny antsipiriany lehibe momba izany. Ny vaovao milaza fa handao antsika izy ity dia nanjary fantatsika noho ireo kinova isan-karazany teo aloha tato anatin'ireto volana ireto.
Ankoatra izany, tsy ny Google Pixel ihany no hankafy ny Android 9.0 Pie. Ny telefaona misy Android One dia efa mandray azy. Ka izany dia fanavaozana goavana efa natombok'ilay orinasa amerikana tamin'ny fomba ofisialy. Ireo finday izay efa tao amin'ny Android P betas dia efa misy io fanavaozana io, na hanana izany ao anatin'ny ora vitsivitsy.
Ny Android 9.0 Pie OTA ho an'ny Google Pixel dia antenaina ho hita anio.. Ny ambiny amin'ireo maodely dia tokony hanana izany amin'ny fotoana iray, fa tsy misy daty voafaritra mazava voalaza amin'izao fotoana izao. Izao no fotoana hankafizana ny vaovao rehetra fa mamela antsika ity kinovan'ny rafitra fiasa ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » Android Version » Eto ny Android 9.0 Pie: Jereo ny antsipiriany rehetra
Space Wall dia piozila mampihetsi-po izay ahafahana mifanentana amin'ny singa geometrika
LG Q8 (2018): Ny elanelam-potoana vaovao tsy misy rano